သမ္မတအိမ်တော်တူနီးရှား - Kais Saied: "ကျနော်တို့ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုလက်ခံရမယ်, ဒါပေမယ့်မပေးစနစ်" - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » မူဝါဒ "နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တူနီးရှား - Kais Saied:" ကျနော်တို့ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုလက်ခံရမယ်, ဒါပေမယ့်မပေးစနစ် "- JeuneAfrique.com
အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကျွမ်းကျင်သူ, အအငြိမ်းစားတက္ကသိုလ်ကထိက, 15 စက်တင်ဘာလ၏ရွေးကောက်ပွဲများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လအနည်းငယ်မှာတော့ဒီမိမိကိုယ်ကိုပင်ပါတီသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည်မရှိဘဲရှေ့တန်းရွေးကောက်ပွဲမှထမြောက်တော်မူပြီ။ ဒါဟာ Jeune Afrique က၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ဦးစားပေးပုံအေုကာင်းရေးသားထားသည်။
သမ္မတ Kais Saied များအတွက်လွတ်လပ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးအပြင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်။ စတင်တည်ထောင်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီမရှိရင်ဒါဟာသေချာပေါက်ကောင်းစွာသည်မိမိအဝတ်ကို constitutionalist ပြင်, တူနီးရှားမှမသိခဲ့သညျ။ ဒါဟာလက်ထက်ကောင်းစွာများအတွက်ရွေးကောက်ပွဲထဲတွင်နေရာဖြစ်ပါသည် မဲပေး၏ပထမဦးဆုံးပတ်ပတ်လည်, စီစဉ်ထားနင်္ဂနွေနေ့စက်တင်ဘာလ 15.
ရှေးရိုးစွဲတန်ဖိုးများဤသည်ဖြောင့်ဥပဒေပညာရှင်, မကြာခဏကသူ၏ဖြောင့်မတ် aped နှင့်သူ၏အသုံးအနှုနျးကိုအပြစ်ပေးပေမယ့်ဂန္ထဝင်အာရဗီ monotonous"Non-စံ" အဖြစ်သူ့ဟာသူဖော်ပြထားသည်။ ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဘို့ anti-system ကိုအကြားတွင်အဆင့်ကမူဝါဒအသစ်အစီရင်ခံစာမလုပ်ပဲနဲ့ပါဝင်သည်။ စိတ်ပျက်ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ vis နိုင်ငံရေးသမားများ၏ထိုအချိန်ကကျယ်ပြန့်တူနီးရှား၏နိုင်ငံသားများအားဖြင့်မျှဝေသည်စာရွက်အလုပ်လုပ်ပုံရသည်။
Jeune Afrique: သင်၏အစီအစဉ်၏အဓိကဆောင်ရွက်မှုများဘာတွေလဲ?
Kais Saied: ငါတူနီးရှားကလူ, အခြားသူများကဲ့သို့အသစ်တခုသမိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်သို့ ဝင်. မူကြောင်းကိုယုံကြည်မိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအစဉ်အလာပရိုဂရမျမရှိကြပါဘူး။ နိုင်ငံသားများရွေးကောက်ပွဲအတွက်သူတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုအစီအစဉ်များကိုမျှော်လင့်ထားပေမယ့်နေ့စဉ်နိုင်ငံရေးဘဝ၏သရုပ်ဆောင်များကိုဖြစ်ချင်ကြပါဘူး။
ကျနော်တို့အသစ်တခုကနိုင်ငံရေး-အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကလူတွေကမင်းအကြားယုံကြည်မှုအသစ်တခုကြားဆက်ဆံရေးလိုအပ်ပါတယ်။ အဓိကသရုပ်ဆောင်သူတို့ကိုငါ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဥပဒေနည်းလမ်းပေးရန်ကြိုးစားဘာဖြစ်လို့ရဲ့, လူများဖြစ်သင့်သည်။
Kais Saied တူနီးရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ကြေညာပထမဦးဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ © Youtube ကို / Abdelmagid Zarrouki
အသစ်ညီလာခံပြည်ပမှာတူနီးရှား၏ 276, 11 ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များလက်ထောက်၏ဖွဲ့စည်းထားသည်
အဘယ်အရာကိုလက်ထက်သင့်ရဲ့ key ကိုအတိုင်းအတာဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
ကြှနျတေျာ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်များတစ်ခုမှာပြီးခဲ့သည့်စကားလုံးပြန်ညီလာခံတွင်ထံသို့လာလိမ့်မယ်, အခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏အသမ္မတရွေးကောက်ပွဲစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ကျွန်မတစ်ဦးချင်းစီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ [ဌာနက] ဒေသခံကောင်စီ၏ဖန်တီးမှုမှတဆင့်, အခန်းစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးအာဏာကိုမြဲမြံစေချင်တယ်။ ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်များက Single-အဖွဲ့ဝင်မဲဆန္ဒနယ်နှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရလိမ့်မယ်။ ရေးဆွဲ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက, ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုပေသည်။
Inde: Des affiches demandant l'interdiction de l'entrée de Digvijaya dans les temples paraissent à Bhopal | Inde Nouvelles